Shenzhen Dituo Electronic Co.,Ltd. [Guangdong,China] व्यवसाय प्रकार:Manufacturer मुख्य बजार: Africa , Americas , Asia , Caribbean , East Europe , Europe , Middle East , North Europe , Oceania , Other Markets , West Europe , Worldwide निर्यातक:61% - 70% Certs:ISO9001, CE, EMC, FCC, MSDS, REACH, RoHS, Test Report, BSCI विवरण:ब्याट्री संचालित अत्यावश्यक तेल विसारक,ब्याट्री संचालित विसारक,तेल आवश्यक विसारक
Home > उत्पादनहरू > गन्ध डिफ्यूजर > युएसबी ब्याट्री संचालित आवश्यक तेल डिफ्यूजर संचालित
सुगन्ध विभाजक मद्दत गर्दछ तपाईंको ऊर्जा gy स्तर र प्रतिरक्षा प्रणाली लाई बढावा दिन , निद्राको क्षमता र ध्यान केन्द्रित गर्ने क्षमता सुधार गर्न, तपाईंको मुडलाई शान्त र तनाव कम गर्न, शान्त र आरामदायी वातावरण सिर्जना गर्न, टाउको दुखाइ हटाउने र दीर्घकालीन पीडा कम गर्न र अधिक बढाउन !
सुपर एरोमाथर्यापी अनुभव - पानी छैन। गर्मी छैन। मात्र १००% शुद्ध तेल प्रसार अरोमाथेरापी। हावाको फुटको प्रयोग गरेर, नेबुलाइजिंग डिफ्यूजरले तेललाई राम्रो धुवामा परिणत गर्दछ। यसले आवश्यक तेलको संरक्षण गर्न मद्दत गर्दछ र बजारमा कुनै पनि अन्य यूएसबी विसारकहरू भन्दा कम आवश्यक तेलको प्रयोग गर्दा बढ्दो आनन्द प्रदान गर्दछ। किनभने कुनै पानी प्रसारको लागि प्रयोग गरिदैन, धुवाँ छोडियो शुद्ध अशुद्ध तेलको वास्तविक माइक्रो-बूँदहरू हो। यो शुद्ध तेल स्वास्थ्य र उपचारको लागि तेलले दिन सक्ने फाइदाहरूको अनुभव गर्न आवश्यक छ।
स्वतन्त्र र लचकता - कुनै तार छैन। मेस छैन। कुनै स्पिलहरू छैनन्। तपाईं लामो समयसम्म पावर आउटलेटमा बाँध्नु भएन! पो वर्फर बिल्ट-इन रिचार्जेबल ब्याट्रीले १ of घण्टा प्रयोगको लागि अनुमति दिन्छ; यसलाई तपाईंको घर वरिपरि सार्नुहोस्, झोलामा फाल्नुहोस्, यसलाई तपाईंको कारमा राख्नुहोस्। स्टाइलिश डिजाइन सबै सजावट जस्तै उत्तम बेडरूम, भान्छाघर, बाथरूम, कफी टेबल, अफिस, स्पा, कार, आदि संग पूर्ण रूपमा मिश्रण गर्दछ।
सर्वश्रेष्ठ मिनी डिफ्यूजरले दिमागको शान्त दिन्छ - अन्य नेबुलाइजर्सको तुलनामा डिटूओ गन्ध विसारकको आवाज सबैभन्दा कम छ! चाइल्ड-प्रूफ, स्पिल-सुरक्षित प्रकार्यले सुनिश्चित गर्दछ कि अल्ट्रासोनिक डिफ्यूजर स्वचालित रूपमा झुकाव हुँदा रोकिन्छ, तपाईंको बहुमूल्य तेलहरूको चुहावट रोक्दछ।
ब्याट्री संचालित विसारक चित्रहरु:
ब्याट्री संचालित आवश्यक तेल विसारक अपरेशन:
USB डिफ्यूजर अनुप्रयोग:
कार ठूलो कोठा व्यापार को लागी ब्याट्री गन्ध विसारक
वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक गन्ध विसारक मेशिन टाइमरको साथ
युके अस्ट्रेलिया क्यानाडा को लागी यूएसबी इलेक्ट्रिक गन्ध विसारक
होटल अफिस कोठाको लागि पानी सुगन्धित विसारक छैन
१० मिलि ग्लास बोतल यूएसबी सर्वश्रेष्ठ होटल गन्ध डिफ्यूजर
आवश्यक तेलको लागि एल्युमिनियम मिश्र धातुको उत्तम गन्ध विसारक
ब्याट्री संचालित अत्यावश्यक तेल विसारक
ब्याट्री संचालित विसारक
तेल आवश्यक विसारक